Ity misy sarin'ireo vehivavy nanana firaisana ara-pitiavana talohan'ny Chioma Rowland - teles relay
Ity misy sarin'ireo vehivavy izay nanana firaisana ara-pitiavana talohan'ny Chioma Rowland i Davido
By bryanekobe On Jona 29, 2020
Ilay superstar mozista Nizeriana Davido, izay tena anarany i David Adeleke, dia nanana fifandraisana am-pitiavana talohan'ny Chioma, izay fofombadiny ankehitriny. Eny tokoa, nanatrika vehivavy maromaro avy amin'ny firenena samihafa ilay kintana talohan'ny nanapahany hevitra tsy hijanona miaraka amin'i Chioma Rowland. Ireto misy vehivavy sasany.
Nish Kards dia modely Ghaneana teraka ny 13 Septambra 1981. Matetika i Nish dia antsoina hoe Kim Kardashian any Ghana. Nodimandry i Davido taona lasa izay, saingy mbola tsy fantatra ny anton'ny fisarahan'izy ireo.
Nanana ny zanany voalohany niaraka tamin'i Sophie Momudu i Davido. Niteraka olana maro ny fifandraisan'izy ireo. Ny mpihira dia reny tsy matotra ary mifoka ny ahi-dratsy. Izany no nahatonga ny zanany vavy Imade Adeleke narary ary rehefa nentina tany amin'ny hopitaly ny ra nalehany, io zavatra io dia hita tao amin'ny rany. Ny fianakavian'i Davido dia nanala ny zaza taminy ary nanandrana nitondra azy nivoaka ny firenena nankany Dubai.
Kamerona - Filoham-pirenena 2018 / Calixte Beyala (Mpanoratra):…
Kamerona: Hatramin'ny nitranga tao amin'ny hotely Intercontinental tany Suisse…
Booba tezitra tamin'ny Master Gims dia namoaka sary tsy misy azy…
Sira Kante dia modely gineana monina any Etazonia izay niaraka tamin'i Davido nandritra ny fotoana fohy tamin'ny faran'ny 2014. Nisaraka tamin'ny 2015 izy ireo, ny taona nahaterahan'i Imade Adeleke.
Amanda no vehivavy faharoa izay nanan-janaka tamin'i Davido. Nihaona izy roa nandritra ny fitsidihan'i Davido an'i Amerika. Tian'ilay mpihira hitoetra irery ny fifandraisan'izy ireo fa indrisy ho azy dia nanjary bevohoka i Amanda. Nomeny tovovavy kely tsara tarehy i Davido, antsoina hoe Hailey Veronica Adeleke.
Ny modely Kenyan dia nisy ifandraisany amin'ny finoanoam-poana Nizeriana nandritra ny fitsidihana nataony tany Kenya ho an'ny fampisehoana mega.
Funmi Aboderin dia nifankatia teo am-pitiavana tamin'i Davido tamin'ny taona 2013. Nanambara azy tamin'ny vahoaka ilay mpihira rehefa avy nandefa bitsika niaraka tamin'ny sarin'ny namany sy ny namany. Mampalahelo fa tsy naharitra ny fifandraisan'izy ireo. Na i Davido na i Funmi aza dia samy niresaka ny momba ny fifandraisan'izy ireo na ny antony nahatonga ny fahatapahan'izy ireo.
Ity lahatsoratra ity dia niseho voalohany tamin'ny: https://afriqueshowbiz.com/davido-voici-les-femmes-avec-lesquelles-il-a-eu-une-relation-amoureux-avant-chioma-rowland-photos/
bryanekobe 698 Lahatsoratra 0 hevitra
Ao anaty bubble MLS: Iza no mpilalao, ekipa afaka manantena any Orlando
Ny zanakavavin'i Paris Michael Jackson dia manome halatra azy amin'ny sary tsy navoaka
Kamerona - Filoham-pirenena 2018 / Calixte Beyala (Mpanoratra): Manamafy fa: “Ny…
Kamerona: Hatramin'ny nitranga tao amin'ny hotely Intercontinental tany Soisa, herintaona lasa izay,…
Booba tezitra tamin'i Master Gims namoaka ny sariny tsy misy solomaso
nanambara ny kandidà ho filoham-pirenena i Kanye West